Wholesale Kurumidza yakagadzikana yakagadzikana bhodhi kapfupi mens beach shorts Shangu Kugadzira uye Fekitori | Stamgon
Kurumidza kuoma yakagadzikana bhodhi akapfeka tsika mens beach shorts
Model Nhamba: SSDKR190807-1
Tsanangudzo: mens beach shorts
Package: 1pc / Kupikisa Bhegi
Nzvimbo Yepakutanga: Fujian, China
☆ Yakasanganiswa chiuno ne elastic uye yakapfava cored tambo uye nesimbi eyelets.
☆ Unhu hwakanaka: Iyo yekushongedza machira ndeye 100% polyester peach ganda velvet, yakagadzikana, uye inogona kufema, kuve nechokwadi kuti uchafarira kwazvo kupfeka. Ongorora: Kugara uchiwanzo: S, M, L, XL, XXL.
☆ Mahomberi maviri epamberi uye muhomwe yerutivi muhombe, yakakodzera kuisa zvimwe zvinhu mukati.
☆ Iyi shangu yemahombekombe inopera iwe unonzwa wakakosha nezve nyaradzo uye mufaro muzororo, nguva yekushambadzira, rwendo rwemhenderekedzo yegungwa, dziva remapati uye zviitiko zvakasiyana siyana zvemvura.
Chigadzirwa zita: Kurumidza kuoma yakagadzikana bhodhi akapfeka tsika mens beach shorts
Mhungu - bhasiketi mapfupi ane OEM ODM Service
Kukura: S / M / L / XL / XXL
Feature: Yakagadzirwa, Inofemedzeka, Vamwe.
Ruvara: Bhuruu, yero, tsvuku
Lable & Logo Yakagadzirirwa logo inogamuchirwa
Muzvitoro zvinhu: Mazuva gumi nemashanu; OEM / ODM: mazuva 30-50 mushure ma sampuli yakatenderwa.
Stamgon ndiyo inoonekera indasitiri kambani inopa nekupa vanhukadzi zvitaera zvakasiyana zvekupfeka, dzakadai sehombodo bikinis, chengetedzo yekushamba, tankinis, 50s retro monokinis, uye hukuru hwekugezesa masutu, zvichingodaro. Sutu yedu yese yakarongedzerwa kuti iwe unzwe uine chivimbo uye uwedzere kunaka. Stamgon timu yakazvipira kuunza vatengi vedu yakanakisa kurongeka chiitiko nekupa iyo yakakwirira miitiro yebasa yakavakirwa pamhando yepamusoro yezvose zvigadzirwa zvedu.
1.Tinogona kuisa tsika logo pane ese zvigadzirwa zvedu, kana iwe uine ichi chinodikanwa, ndapota tumira email kwatiri nemufananidzo wako weaka logo uye nehuwandu hwekurongedza, ipapo isu tichaongorora mutengo wekudhinda uye toita ratidzira kwauri mukati mezuva rimwe rekushanda.
2.Tinogonawo kugadzira masutu matsva seyako yekudhirowa dhizaini, sampu, kana mapikicha akajeka.
3.Acceptita kurongedza saizi uye mavara.
4.Fabric zvinyorwa zvinogona kuchinjwa pane zvaunoda.
5. Isu tine yedu yekudyidzana yekudyidzana fekitori, inogona kuendesa panguva yakakodzera.
6.Nice shipping shipping tracking uye inodzosa mutemo mushure mekunge zvinhu zvaendeswa.
Yepfuura: Kurumidza kuoma yakagadzikana bhodhi kapfupi yakadhindwa mens swimwear
Inotevera: Kurumidza kuoma yakagadzikana bhodhi zvipfupi zvakadhindwa mens tsika beach shorts
Vakomana Bhawa Shorts
Tsika dzebhawa Shorts
Kurumidza kuoma yakagadzikana bhodhi kapfupi tsika kudhinda ...